Size of Christmas Island compared to Zimbabwe
Christmas Island is about 2,894 times smaller than Zimbabwe.
Zimbabwe is approximately 390,757 sq km, while Christmas Island is approximately 135 sq km, making Christmas Island 0.03% the size of Zimbabwe. Meanwhile, the population of Zimbabwe is ~13.8 million people (13.8 million fewer people live in Christmas Island).
This to-scale map shows a size comparison of Zimbabwe compared to Christmas Island. For more details, see an in-depth quality of life comparison of Christmas Island vs. Zimbabwe using our country comparison tool.
Size of Christmas Island vs. United Kingdom
Size of Christmas Island vs. Austria
Size of Christmas Island vs. Indiana (US)
Size of Christmas Island vs. Texas (US)
Size of Christmas Island vs. Ohio (US)